Andron’ny ladoany : nampahafantarana ny ” ODD on line” | NewsMada
Andron’ny ladoany : nampahafantarana ny ” ODD on line”
Amin’ny maha anisan’ny seranan-tsambo lehibe azy aty Afrika, nankalaza ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny fadintseranana ny teto Toamasina, ny 26 janoary teo. Lohahevitra noraisina tamin’ity taona ity ny hoe « fampiasana ny teknolojia vaovao ODD on line» (Observatoire de délai de dédouanement). Nitarika ny fotoam-pankalazana ny talen’ny kabinetran’ny minisiteran’ny Vola, Razananirina Bruno, sy ny tale jeneralin’ny fadintseranana, Rabenja Eric, ary ny tale jeneralin’ny GasyNet.
Nambaran’ny tale kabinetran’ny minisitera fa nohatsaraina ny ODD, hanafainganana ny fikirakirana famoahan’entana sy ny pitsopitsony ao amin’ny ladoany ary vinavinaina ho vita ao anatin’ny 48 ora izany farafahelany ao anatin’ny seranan-tsambo. Nanamafy izany ny tale jeneralin’ny fadintseranana satria mety hiantraika any amin’ny mpanjifa ny fahataran’ny famoahana entana ao amin’ny ladoany.
Ho an’i Toamasina manokana, efa nisy hatramin’ny taona 2011 ny ODD, fa tsy mbola ODD on line izy tamin’izany fotoana izany. Notolorana mari-pankasitrahana ireo mpiasan’ny fadintseranana sy teknisianina namolavola ity paikady enti-miasa haingana “ODD on line” ity miampy ireo mpiasa nahavita be ao amin’ny fadintseranana malagasy.